umlomo spray abangatshatanga kunye ezimbini - China ZhongPeng Special Ceramics
SMP Desulphurizing esemzimbeni
Anti-Wear Inner Nethemba
Sandspit and wesampula Bushing
RBSiC SiSiC .K
Sokukhuphela nemilomo and Flame esemzimbeni
SiSiC (RBSiC) Indawo Special
Silicon esemzimbeni khabhayithi ukuphazamiseka
iindawo ezikhethekileyo ceramic suppliers
High-umthamo obhityileyo-eludongeni kunye namandla eliphezulu ngokuyinyibilikisa f ...
Reaction-yesondo lesilicon khabhayithi weziko ipleyiti
Sokukhuphela umlomo kunye isahluli nelangatye
umlomo spray Single kunye ezimbini
Reaction-yesondo lesilicon khabhayithi yethemba, ce Technical ...
RBSC Full Cone Sprial umlomo
1.5 intshi Chela desulfurization umlomo
RBSC (SiSiC) nemilomo desulphurization ezi iindawo ezingundoqo inkqubo desulphurization igesi ulwelo izityalo amandla thermal kunye boilers enkulu. ngokubanzi Bona ifakwe kwinkqubo desulphurizaiton igesi ulwelo izityalo amandla thermal ezininzi kunye boilers ezinkulu.
indlela umlomo Single
Kwi-21 amashishini ngenkulungwane ihlabathi liya ngokubanzi kujongana neemfuno ziyenyuka zokucoca imisebenzi, ngakumbi kakuhle.
inkampani ZPC lizimisele ukwenza indima yethu ukukhusela okusingqongileyo. ZPC kakhulu kuyilo umlomo yokutshiza kunye ezintsha zobugcisa ukulungiselela ushishino ulawulo longcoliseko. Ngenxa ephakamileyo spray umlomo ukusebenza kunye nokuthembeka, ukukhutshwa ephantsi yityhefu nomoya wethu namanzi ngoku kuphunyezwa. yoyilo umlomo kunathi Bete kaThixo ziyavela nokuphungulwa umlomo wokufaka, ukuphucula unikezelo ipateni zokutshiza, ubomi umlomo liyatshona, kwaye nokuthembeka eyonyukileyo kunye nokusebenza.
Le umlomo kakhul uvelisa obhulowu ubukhulu lincinci kwi xi iphantsi nto leyo iimfuno ngamandla yancitshiswa ngenxa sokumpompa amanzi.
• Umgca ebanzi of nemilomo ezijikeleze kuquka yoyilo eziphuculweyo ucingo-resistant, engile ebanzi, kunye noluhlu olupheleleyo lokumpompoza.
• A uluhlu olupheleleyo uyilo standard esatsiba: owongozelelweyo tangential, nemilomo diski nanjengesivuthevuthe, kunye nemilomo fan, kunye nemilomo umoya atomizing nephantsi eliphezulu-flow ukuze acime kunye izicelo wokutyula owomileyo.
• ukukwazi nanto ukuyila, ukwenza undihlangule nemilomo ngentando. Sisebenza kunye nani ukuhlangabezana imimiselo enzima urhulumente. Sinako ukuhlangabezana neemfuno zakho ezizodwa, ekunceda ukuba ukuphumeza ukusebenza kwenkqubo ngokupheleleyo.
Inkcazelo emfutshane ye FGD Scrubber Zones
Kweli candelo scrubber, irhasi ezishushu ulwelo kuyacuthwa kobushushu ngaphambi kokuba bangene pre-scrubber okanye absorber. Oku kuya kusikhusela ubushushu amacandelo ezibuthathaka kwi absorber nokunciphisa umthamo werhasi, ukuze kwandiswe ixesha yokuhlala kwi absorber.
Eli candelo kusetyenziswa ukususa, i kloride, okanye zombini ukusuka igesi flue.
Oku udla nenqaba zokutshiza vula kuzisa scrubber oluludaka wawumdibanisa igesi ulwelo, sivumele abasabela yemichiza babopha i SO 2 ukuba kwenzeka sump.
Ezinye ziye icandelo nokupaka. Kweli candelo, lo oluludaka isasazeka kwi ivale okubi okanye structured ukuze kwandiswe kumphezulu wadibana igesi flue.
Ezinye ziye ipleyiti tubing ngentla kwicandelo absorber. Oluludaka lifakwa ngokulinganayo kule isitya, apho bobabini equalizes le sokuqukuqela serhasi kwaye inikeza indawo umphezulu wadibana igesi.
Zonke iinkqubo FGD manzi generate ipesenti ethile zamathontsana entle kakhulu ukuba yenziwa yi intshukumo irhasi ulwelo ukuya exit nqaba. The eliminator inkungu yi uthotho vanes kwalula ukuba mgibe kwaye ngamafuphi amathontsi, ebavumela ukuba zibuyiselwe nkqubo. Ukuze alondoloze kwamathana eliphezulu ukusebenza ukususwa, le vanes inkungu eliminator kufuneka zicocwe rhoqo.
cone Ulenze Tangential kuqhwithela TH Series
• Series wakhangela nemilomo ekunene usebenzisa ugwebu tangential ukuveza nanjengesivuthevuthe
• ucingo-resistant: nemilomo akukho iindawo yangaphakathi
• Ukwakhiwa: omunye-sifuba
• ukuxhumeka: flanged okanye ibhinqa, NPT okanye BSP imisonto
• kakhulu nokuba ukutshiza lonikezelo
• Iindlela Chela: cone kuthembeke
• angles Chela: 70 ° ukuba ° 120
• Amazinga Flow: 5 ukuya 1500 gpm (15.3 ukuya 2230 l / min)
Kunye nobukhulu ezizodwa ukuhlangabezana iinkcukacha zakho ngqo
Amanzi esatsiba Cone Spiral Full
• I-umlomo original siba
• High benza Velocity
• Ukusebenza amandla High
• ucingo-resistant: yokwakha mnye-sifuba kungekho iindawo yangaphakathi
• Ukwakhiwa: omnye, ababini okanye inxenye emithathu-ivoti
• ukuxhumeka: NPT okanye imisonto BSP umgangatho oyindoda uxhulumaniso, imisonto ababhinqileyo kunye uqhagamshelo flanged ekhoyo ngokomyalelo ezizodwa
• ipateni Chela: cone ngokupheleleyo kwaye kuthembeke
• Amazinga Flow: 0.5 ukuya 3320 gpm (2.26 ukuya 10700 l / min) amazinga flow aphezulu ezikhoyo
Material: Reaction kwii Silicon khabhayithi (RBSC)
Ubungakanani: 0.75 intshi, 1.2 intshi, 1.5 intshi, 2 intshi, 2.5 intshi, 3 intshi, 3.5 intshi, 4 intshi, 4.5 intshi ngokweemfuno zakho ethile.
Previous: Silicon khabhayithi umlomo, flanged
Okulandelayo: indlela eyodwa Desulphurizing umlomo
FGD Chela Scrubber esatsiba
nemilomo Cone Chela full
Pheleleyo umlomo Jet Chela
Wosenza Cone Spiral Chela umlomo
Wosenza Cone Chela esemzimbeni
RBSiC Spiral ukutshiza umlomo
Silicon khabhayithi Chela umlomo
Sillicon khabhayithi Spiral ukutshiza umlomo
solid Cone Chela umlomo
Spiral full Cone spray umlomo
Spiral full Cone Chela nemilomo
Chela Fan Water Jet esatsiba
umsinga Silicon khabhayithi chela umlomo
umlomo omtsha Chela
coupling yangaphakathi umlomo RBSC spray yangaphakathi
DN40 umsinga cone umngxuma lesilicon khabhayithi umlomo
1.5 intshi Chela umlomo
umsinga cone kuthembeke umlomo
silicon khabhayithi desulfurization umlomo